Mandeha kilometatra lavitra ny mpiasan'ny trano fandraisam-bahiny ao Corinto
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Mandeha kilometatra lavitra ny mpiasan'ny trano fandraisam-bahiny ao Corinto
Aogositra 14, 2018
Ireo mpiasan'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny trano fivorian'ny korosiana, ny famoriam-bola misy hotely kintana 5, dia nahita fotoana hanaovana zavatra bebe kokoa noho ny asany isan'andro fotsiny.
L to r:,; Fandaharam-pianarana ivelan'ny trano any amin'ny Hotely St George's Bay, Malta
Nandritra ny taon-dasa, ny mpiasan'ny trano fandraisam-bahiny ao Corsias, ilay hotely misy kintana dimy manerantany, dia manana fotoana hanaovana zavatra bebe kokoa noho ny asany isan'andro fotsiny.
Tafiditra ao anatin'ny fianarana, fivoarana ary lafiny mahasoa ny andraikitr'izy ireo, izy ireo dia nilentika tamin'ny fiarahamonina teo an-toerana tamin'ny alàlan'ny asa an-tsitrapo sy fitadiavam-bola ho an'ny tanjona tsara. Io dia manampy ny fiantrana orinasa Corsios Hotels, Just Drop, ary natosik'i Rachel Begbie, talen'ny fianarana, fampandrosoana & fanambinana voalohany an'ny orinasa, voatendry tamin'ny Desambra 2017.
"Ny trano fandraisam-bahiny tsirairay avy dia samy nanangana fikambanana mpanao asa soa eo an-toerana izay iarahan'izy ireo miasa isan-taona ary manao hetsika fanangonana vola farafahakeliny farafahakeliny mandritra io fotoana io," hoy i Rachel Begbie. “Ampahany amin'ny andraikitra ara-tsosialy ataonay amin'ny maha-mpampiasa anay ary, mihoatra izany, dia manampy amin'ny fampidirana ireo mpiasa ao amin'ny fiarahamonina misy azy ireo.
“Ny asa soa voafidy dia nosafidin'ny mpiasa sy ny hôtely, ka mety hifandray mivantana amin'ny iray amin'ireo mpiasa na zavatra manan-danja amin'ilay toerana halehany. Eto amin'izao tontolo izao ankehitriny dia samy te hanana fotoana hamerenana amin'ny laoniny ny tsirairay, ka amin'ny alalàn'ny 'Fiaraha-monina misy anao', i Corinto dia manao izany ho an'ny hotely tsirairay. ”
Ny vondrom-piarahamoninao dia iray amin'ireo singa valo mandrafitra ny Experience any Colombia Colleague, fandaharan'asan'ny mpiasa natombok'i Rachel Begbie tamin'ny fahavaratra namakivaky ny Hotels Hotels. Ireo singa hafa dia: Fun & Connectivity, Communication, Health & Wellbeing, your development, Recognition, your environment and Live N Synch.
Ireto ambany ireto ny safidin'ireo asa soa natolotry ny trano fandraisam-bahiny Korinto fito mba hampirisika azy hatramin'ny nanombohana azy:
Corinthia Palace Hotel & Spa, Malta: ny hotely dia nanao Fetiben'ny Fanomezana ho an'ny Fetin'ny Reny mba hanangonana vola ho an'ny fiantrana Beyond the Moon ary nanangona 5,228.00 £ (eo ho eo amin'ny $ 6,668.00). Ny hotely dia hanao fampirantiana Krismasy fanomezana amin'ny volana Novambra sy ny fiaraha-misakafo Gala Auction & Auction amin'ny volana Oktobra noho io antony io ihany.
Fandaharam-pianarana ivelan'ny trano any amin'ny Hotely St George's Bay, Malta
Corinthia Hotel St Petersburg: Eo akaikin'ny Village SOS Children's - izay manohana ny zaza nilaozana, sahirana ary kamboty - dia nanatontosa hetsika Krismasy nentim-paharazana ho fampiroboroboana vola ho an'ny ankizy ny trano fandraisam-bahiny ary avy eo nandravaka ny hazo krismasy tao amin'ny lobby. Nividy azy ireo ho fanomezana ny vahiny.
Corinthia Hotel St George's Bay, Malta: Ny hotely dia nanofana zazalahy kely izay napetraka tamina toerana eo an-toerana amin'ny fahaiza-manao asa ary ao anatin'izany ny teknika fanadihadiana.
Corinthia Hotel Prague: Ny hotely dia miara-miasa amin'ny charity NF Sance Onkolackum eo an-toerana mba hamelomana ny ankizy voan'ny homamiadana, miaraka amina hetsika fanangonana vola isan-karazany, ao anatin'izany ny hetsika fanomezana fanomezana isan-taona.
Corinthia Hotel Lisbon: manohana antony marobe ny hotely, ao anatin'izany ny fiantrana Acreditar izay manampy ny ankizy voan'ny homamiadana, mandefa sakafo ambiny any Refood izay manome sakafo ho an'ireo sahirana, ary manohana ireo niharan'ny hain-trano tamin'ny taon-dasa tany Portugal. Ny ankamaroan'ny afo dia tratra tany ambanivohitra ka nanangona vola ny trano fandraisam-bahiny mba hamboly hazo indray ary hanangana foibe famokarana osy ohatra.
Corinthia Hotel Khartoum: Nanohana andro iray hamahanana mpianatra 1,000 manerana an'i Khartoum ny hotely, anisany ireo ankizy tsy manan-kialofana. Mpiasa Corinto 13 eo ho eo no nanomana sy nanatitra sandwich nentin-drazana tamin'ny fotoan'ny sakafo maraina niaraka tamin'ny Mojaddidon Charity Organization.
Ny asa soa dia miitatra amin'ireo trano fandraisam-bahiny tantanan'i Corinto, ao anatin'izany:
Radisson Blu Golden Sands, Malta: Ny trano fandraisam-bahiny dia nivarotra fivarotana mofo sy fivarotana menaka oliva - avy amin'ny hazo oliva tao amin'ilay toeram-pivarotana - mba hanangonana vola ho an'ny zazalahy roa voan'ny cerebral palsy.
Toerana fizahan-tany malaza indrindra an'ny firenena eropeana ho an'ny mpizahatany GCC
Ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany dia niteraka 18% ny harin-karena faobe any Nouvelle Zélande tamin'ny 2017